Mas’uul Ka Noqoshada Iyo U Maamulidda Dhaqaalaha | LawHelp Minnesota
Mas’uul Ka Noqoshada Iyo U Maamulidda Dhaqaalaha
Guardianship and Conservatorship (PDF)432.87 KB
Goorma ayaa loo baahan yahay mas’uul ka noqoshada iyo u maamulidda dhaqaalaha?
Marka aanu qofku maareyn kaarin baahidooda gaarka ah, maxkamadda ayaa u magacaabi karta qof caawiya. Aanu maareyn karin waxaa loola jeedaa in qofku gabo fahamka iyo awoodda uu ku gaari karo kuna fulin karo go’aanada shaqsiga ah. Ma qabsan karo waxyaabaha aasaaska u ah nolosha sida cafimaadka, dhar xirashada, hoyga iyo degaanka, ama uu daryeelo arrimaha la xiriira maaliyadda, xitaa haddii la caawiyo. Maxkamadda ayaa go’aan ka gaarta haddii u qofku gabo intaas oo dhan.
Qofna markiiba looma aqoonsado inuu gabay go’aan isu gaarista haddii cudurada qaarkood ay ku dhacaan sida cudurka xusuusta qofkaka qaada, ama ay naafo noqdaan. Maxkamaddu waxa ay eegtaa waxyaabo fara badan marka ay go’aan ka gaarayaan haddii uu qofku gabay iyo in kale.
Waxaa laga yaabaa in maxkamaddu ogolaato in qofka mas’aal laga noqdo ama loo maamulo dhaqaalaha laakiin aysan aheyn qeyb kasta oo ka mid ah qofka noloshiisa. Taas waxaa lagu magacaabaa Mas’uul Ka Noqoshada Ama U Maamulidda Dhaqaalaha ee Kooban. Mas’uul Ka Noqosho ama U Maamulid dhameystiran waa talaabada ugu dambeysa oo inta badan maxkamaddu tixgeliso marka aan taageerada kale ee qofka loo fidiyo aanay ku filneyn.
Qofka u baahan mas'uul ka noqoshada ama u maamulidda dhaqaalaha lagama qaado xuquuqda aasaasiga ah, sida xaqa uu u leeyahay inuu codeeyo, haddii aysan jirin sabab macquul ah ama aysan ka soo saarin amar gaar ah.
Waa maxay faraqa u dhaxeeya labadooda?
Mas’uul ka noqoshada qof u baahan caawinadda waxaa lagu magacaabaa qofka mas’uulka laga noqonayo. (Waxaa horey loogu magacaabi jirey “mas’uulka laga yahay (ward)” qofka caawinayana waxaa lagu magacaabaa mas’uul. Mas’uulka ayaa daboola baahida qof ahaaneed ee qofka laga noqonayo mas’uulka.
La Maamule waxaa lagu magacaabaa qofka loo maamulayo hantida uu heysto. (Qofkaas oo horey loogu yeeri jiray qofku sharcigu ilaaliyey “protected person”) Qofka caawinaya waa u maamule. Mas’uulka ayaa daboola baahida maaliyadda qofka loo maamulayo.
Mararka qaarkood, maxkamadda ayaa magacowda qof mas’uulka ka noqda oo hantidana u maamula. Maxkamaddu waxa ay eegtaa sida lagu caawinayo qofka mas’uulka laga noqonayo ama hantida loo maamulayo iyada oo xakameynta ugu yar qofka dusha laga saarayo.
Mas’uul ka noqoshada iyo u maamulidda hantida waa mid aad khatar u ah ujeedo wanaagsan ayaana loola jeedaa. Sharciyada Minnesota waxa ay dhiirigelinayaan in dadku isku dayaan habab kale oo ka xakameyn yar ka hor inta aanay diiwaangelin mas’uul ka noqoshada ama hanti u maamulka. Dadka qaarkood waxa ay isku dayi karaan:
Qoritaanka go’aan u gaarista caafimaadka. Akhri xogta urursan ee Go’aan U Gaarista Caafimmadka.
Qoritaanka u wakiilashada sharciga. Akhri xogta urursan ee Qoritaanka U Wakiilashada Sharciga Ah.
U wakiilasho qof u qaada lacagta lambarka bulshada, ama
Ama qof shaqaale ah oo caawiya.
Qofka maxkamadda weydiisanaya mas’uul ka noqoshada waa inuu faahfaahin ka bixiyaa waxyaabaha kale ee ay isku dayeen ama aysan waxyaabaha kale u shaqeyn waayeen.
Waa maxay awoodda sharciga ah ee qof mas’uulka noqonaya ama u maamulaya hantida?
Qofka mas’uulka ka noqonaya ayaa go’aan u gaaraya qofka – Iyaga ayaa go’aan uga gaaraya waxyaabaha shaqsiga ah, sida daryeelka caafimaadka, ama halka qofku ku noolaanayo.
U maamulaya hantida waxa awood u leeyahay arrimaha maaliyadda - waxa ay maamulaan hantida iyo lacagta qofka. Dakhligiisa ayey hayaan oo ka bixiyaan biilasha.
Mas’aaulka ama maamulaha hantida ma aha in ay jeebkooda ka bixiyaan kharashka. Waxa ay ka bixinayaan hantida ama maaliyadda qofka ay u adeegayaan. Laakiin waa in ay maxkamadda wargeliyaan - inta badan hal mar sanadkiiba - lacagta soo gashay qofka ay u adeegayaan, sida loo bixiyey ama loo maamulay. Iyaga ayaa mas’uul ka noqonaya haddii ay lacagta si qaldan u maareeyaan.
Mas’uulka ama qofka maamulaya waa in uu la hadlaa qofka ay u adeegayaan oo ay raacaan sida uu doonayo ee suurogalka ah. Mas’uulka iyo qofka maamulaya hantida waa in ay ka shaqeeyaan sida ay ku jirto danta qofka ay mas’uulka ka yihiin ama hantida u maamulayaan.
Tusaale ahaan, qofka mas’uulka ah waa inuusan ogolaan daaweyn loo fidinayo qofka oo ay ogsoon yihiin in ay liddi ku tahay diinta qofku aaminsan yahay. Ma xadidi karaan xoriyadda qofka ay mas’uulka ka yihiin haddii aysan muhim u aheyn qofka oo khatar laga badbaadinayo.
Waa xuquuqda qofka mas’uulka laga yahay ama hantida loo maamulayo.
Qofka laga yahay mas’uulka ama hantida loo maamulayo xuquuq sharci ah ayuu leeyahay. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan waxyaabo xadidaya taasoo ku xiran amarka ay maxkamaddu bixiso. Laakiin guud ahaan, waxa uu qofku xaq u leeyahay:
In loola dhaqmo si ixtiraam ku dhisan. Taas waxaa ka mid ah in la ixtiraamo habka daawada uu doonayo iyo diinta uu aamisan yahay.
In loo fidiyo daaweynta uu u baahan yahay waqtiga uu u baahan yahay.
Inuu maamusho waxyaabaha noloshiisu khuseeya oo maxkamaddu aysan amrin in qof kale mas’uul ka yahay.
In ay loo magacaabo qof mas’uul ka noqda ama u maamula hantidooda.
Waxa ay weydiisan karaan maxkamadda in ay ka guuraan halkaay degan yihiin ama qof kale laga hor istaago inuu ka raro halka uu degan yahay.
In aad go’aan ka gaarto sida laga yeelayo hantidaada gaarka ah sida dharkaaga, qalabka guriga, gaariga. Waxa kale oo xaq u leeyihiin in ay maxkamadda weydiisan karaan in ay eegto qorshaha qofka mas’uulka ka noqonaya ama maamulaya hantidooda uu ka damacsan yahay alaabadooda qof ahaaneed.
In qarsoodi laga dhigo macluumaadkooda.
In ay doortaan cidda ay la hadli karaan ama booqan karaan (haddii aysan jirin sababai in booqashadaas ay khatar ku tahay nabadgelyadooda).
In aad guursato oo caruur aad dhasho. Qofka mas’uulka laga yahay ama hantida loo maamulayo waxa uu xaq u leeyahay inuu ogolaado ama diido in ilmaha laga joojiyo.
Weydiiso maxkamadda in ay joojiso ama bedesho mas’uulka ka noqoshada ama u maamulidda hantida.
In uu qareen ku matalo dhageysiga oo dhan, oo ay ka mid tahay inuu ku caawiyo oo maxkamadda weydiiyo wixii isbedel ah.
In aad qori karto dardaaran caafimaad ama aad cid u wakiilan karto. Akhri xogta urursan ee Dardaaranka Caafimaadka.
Goorma ayaa loo sameeyaa mas’uul ka noqoshada iyo u maamulidda dhaqaalaha?
Qofka ayaa soo gudbiya codsi (lagu magacaabo arji) oo maxkamadda weydiista inuu u magacaabo inuu mas’uul ka noqdo ama u maamulo hantida qof kale oo u baahan yahay in la caawiyo. Qofka caawinaadda u baahan waa in la wargeliyaa arjiga maxkamadda loo soo qoray. Qofka caawinaadda u baahan waxa uu xoq u leeyahay in uu qareen qabsado. Haddii aanu qareen qabsan karin, maxkamadda ayaa amri karta in degmadu bixiso oo u qabato.
Qofka soo gudbinaya codsiga waa inuu soo bandhigaa “si cad oo maxkamaddu ku qanacdo” in loo baahan yahay mas’uul ka noqosho ama u maamulidda hanti. taasi way adag tahay haddii qofka u baahan aanu ogoleyn. Haddii maxkamaddu ogolaato mas’uul ka noqoshada ama u maamulidda, amarka maxkamadda ayaa lagu caddeeyaa ilaalinta xuquuqda qofka mas’uulka laga noqonayo ama hantida loo maamulayo. Amarkaasi waxa uu qofka mas’uulka noqonaya ama hantida u maamulaya waxay ay leeyihiin awood buuxda, laakiin waxaa suurogal ah in meelaha qaarkood uu sharcigu xadidayo.
Waxaa jira foomam aad maxkamadda weydiisan karto si aad u codsato in aad mas’uul ka noqoto ama aad hantida u maamusho qof u baahan in la caawiyo.
Soo booqo www.mncourts.gov.
Guji La Soo Bax Foomamka
Gu ji Mas’uul Ka Noqoshada/ U Maamulidda Hantida
Yaa loo magacaabi karaa noqon kara mas’uul ama u maamule?
Maxkamadda ayaa go’aan ka gaarta cidda loo magacaabayo mas’uul ka noqoshada ama maamulidda hantida. Maxkamaddu waxa ay dooran kartaa:
Qof mas’uul ka noqda oo horey u caawinayey qofka mas’uulka laga noqonayo kuna sugan gobolkan ama gobol kale.
Wakiil horey loogu magacaabay dardaaranka caafimaadka ama wakiil ka noqoshada.
Sayga ama xaaska ama qof kale oo dardaaranka lagu sheegay.
Ilmo weyn oo qofku dhalay.
Inta badan, qof lacag ku qaata oo daryeela sida qof uu kharashkiisa bixiyo ceymiska caafimaadka ama goob ay kalkaaliyayaasha caafimaadku ku hayaan bukaanka aan loo qaban karin mas’uul ama qof maamula hantidooda.
Waxaa wanaagsan in laba qof loo magacaabo in ay mas’uul ka noqdaan ama maamulaan hantida qofka, gaar ahaan laba qof oo waaweeyn oo uu dhalay qofka xusuus guurka qaba, ka dibna ay maxkamaddu magacoowdo laba qof oo kale oo mas’uuliyadda la wadaaga ama la maamula hantida.
Qofka mas’uulka laga yahay ama hantidiida loo maamulo maxkamadda dib ma ugu noqon karaa haddii ay dareemaan in qofka mas’uulka ka ah ama hantida u maamulaya uusan ugu adeegeyn sida ay dantoodu ku jirto?
Haa Qofka mas'uulka ah ama maamulaya hantida waxa markasta la soconaya maxkamadda, iyada oo qofka mas’uulka laga yahay ama hantida loo maamulayo uu maxkamadda weydiisan karo in ay sameeyaan waxyaabo kala oo ka duwan.
Qofka mas’uulka laga yahay ama hantida loo maamulo waxa uu xaq u leeyahay in qareen loo qabto dhageysiga maxkamadda ee mas’uulka noqoshada ama u maamulidda hantida. Qofku waxa uu la xiriiri karaa qareenka ay maxkamaddu u qabatay Haddii uu garanayo. Waxa kale oo qofku la xiriiri karaa ama waraaq u kori karaa maxkamadda oo weydiisan karaa in dhageysi loo qabto ama loo qabto qareen caawiya.
Mala joojin karaa mas’uul ka noqoshada ama u maamulidda hantida?
Haa Maxkamadda ayaa joojin karta mas’uul ka noqoshada ama u maamulidda hantida haddii qofka mas'uulka laga yahay ama hantida loo maamulayo uu muujiyo inuusan u baahneyn caawinaad ama badbaadin. Inta badan, dhakhtar ama qof shaqaale ah oo la shaqeeya ayaa maxkamadda ka hor cadeeya in qofka mas’uulka laga yahay isku filan yahay oo arrimihiisa maareyn karo. Haddii ay maxkamaddu ogolaato, kor kala socoshada maxkamaddu way dhamaaneysaa qofka mas’uulka laga yahay ama hantidiisa loo maamulo isaga ayaa go’aan isu gaaraya.
Macluumaad dheeraad ah, waxa aad ka heleysaa Fiidiyoowga Mas’uul Ka Noqoshada Ama U Maamulidda Hantida ee maxkamadda Gobolka Minnesota ee www.mncourts.gov
Guji Mowduucyada Caawinaadda
Guji U Maamulidda Hantida ama guji Mas’uul Ka Noqoshada
Botonka ay ku taal Overview,guji Fiidiyoowga Mas’uul Ka Noqoshada/ U Maamulidda Hantida
Waxa kale oo Bogga Maxkamadda Gobolka Minnesota ka heleysaa Buuga Mas’uul Ka Noqoshada Iyo U Maamulidda Hantida. Waxa uu ku jiraa halka uu fiidyoowga ku jiro dushiisa laakiin hoos timaadda botonka Rules, Laws & Resources.